I-Lushan【Bona igumbi lokulala elikhulu le-fog-Mountain】
Jiujiang, Jiangxi, i-China
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-又见云栖民宿
Bheka futhi i-Yunqi B&B itholakala maphakathi ne-Lushan Scenic Area, uhambo lwemizuzu engu-10 ukusuka ku-Guling Street Central Park kwesokunxele, kanye nohambo lwemizuzu emi-5 ukusuka emnyango wesiteshi sezintambo ngakwesokudla. Kulula kakhulu futhi kulula ukuhamba usuka ezindaweni ezibukekayo, noma ngabe uhamba ngezinyawo noma ngezimoto zabavakashi.
Sinamagumbi ezivakashi angu-12 afudumele futhi anethezekile ezinhlobo ezihlukahlukene.Izindawo ezisekela izivakashi kanye nezindawo zokuhlala emakamelweni ziyacabangela futhi zihlome kahle, futhi zihlotshiswe kahle.Amanye amagumbi afakwe izingadi ezizimele, amachibi okubhukuda, nobhavu bangaphandle.
Kukhona ideski elingaphambili kanye nesitolo sokudla esitolo sokuhlinzeka ngezinsizakalo ezivakashini noma nini, noma kuphi.
U又见云栖民宿 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Jiujiang namaphethelo